‘शिरफूल शिरैमा’ को ‘दोषी को’ ? « Ramailo छ
‘शिरफूल शिरैमा’ को ‘दोषी को’ ?
समाजिक बिषयमा निर्माण गरिएको ‘दोषी को’ फिल्मको ‘शिरफूल शिरैमा’ बोलको गीत सार्वजनीक गरिएको छ । निमा लामा तामाङको निर्देशनमा बनेको फिल्मको सो गीत मेलिना राईले गाएकी हुन् । निर्माता गोपी अधिकारीको शब्द र संगीत रहेका गीतको कोरियोग्राफी रमेश रेग्मीले गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
दोषी को ? का गीतमा अन्जु पन्त, मेलिना राई, गोपी अधिकारी र सन्तोष सुनामको स्वर छ । गोपि अधिकारी र सन्तोष सुनामको शब्द छ । फिल्मको पहिला बिभिन्न देशमा शो गरेपछि मात्रै नेपालका हलमा प्रदर्शन गरिने जानकारी निर्माता गोपीले दिएका छन् । करण फिल्मस् प्रोडक्शनको ब्यानरमा करण थापा मगर प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मको कथा र पटकथा करण आफैले लेखेका हुन् ।
सुवास नेपाली, करण थापा, सपना लामा, नेहा गौतम, रमेश रेग्मी, मिठु आले,रबिना थापालगायतका नवकलाकारको अभिनय रहेको फिल्ममा पांच वटा गीत समाबेश छन् । त्यसमध्ये पहिलो गीत स्वरुप शिरफुल शिरैमा सार्वजनीक गरिएको निर्देशक निमाले बताएका छन् ।